TSALELA UMBELEKISI I-BBC1: UJACK ASHTON KUMDLALO OWAMNIKA IQABANE KUNYE NOSANA. KWAKHONA I-PBS, I-BBC YOKUQALA, I-TVNZ 1 - IRADIO TIMES - UMDLALO WEQONGA
Tsalela umnxeba inkwenkwezikazi uMjack Ashton ngendlela umboniso obutshintshe ngayo ubomi bakhe
UJack Ashton noCharlotte Ritchie, Biza uMdlezana (BBC)
Emva kwesiqendu sangeCawe ephelileyo, ababukeli bebemangalisiwe - bebesoloko bexelela uAshton kuTwitter indlela abonwabe ngayo kuba uRitchie ebuyile. Kodwa nabadlali babengenalo ixesha elininzi lokulungiselela ukwahlulwa. Sasisazi ukuba uChar uza kuhamba ngaxa lithile, kodwa sasingazi ngokuqinisekileyo de sifumane izikripthi, utshilo. Kodwa ukuba abafundi beRadio Times bothukile, siyaluphelisa olu luhlu kule veki ngenqaku elikhaphukhaphu-elibuhlungu, elonwabisayo, kodwa inqaku elilula.
Ngaba oko kungabandakanya ukubuyela kukaTom kunye nelangatye lakhe elidala iTrixie?
Uphele yintsini. Hayi… ungacinga? uthi. Andiqondi ukuba angaxolelwa ukuba ebejonge abantu abanokumkhangela ekuvukeni komfazi wakhe. UTom usentlungwini kwaye uza kuba buhlungu kangangexesha elithile. Amadoda ngelo xesha ayenamaqhosha, kodwa ndacinga, ‘Utshatile nje. Uyathandana. Unalo lonke ilizwe eliphambi kwakhe, lize eli ke liwele kuye. ’Sisiphelo esibuhlungu ngokwenene.
Uthetha ukuthini ngokuphela? Ngaba uTom akazukubuyela ukufowunela umbelekisi kunyaka olandelayo?
U-cagey. Siza kubona, encumile. Mhlawumbi ukuluhlu lwesibhozo kwaye mhlawumbi akakho.
Biza umbelekisi (BBC)
Ngo-Ashton, ewe, Biza uMdlezana uMama obelekisayo uphawule isiqalo esitsha sobomi bakhe kunye nobomi bakhe bobuqu. Wadibana noHelen George ngo-2013 kwaye badibana ngelixa badubula i-2016 yeKrisimesi ekhethekileyo eMzantsi Afrika. Kodwa oku kuguquka kobomi kweziganeko kuphantse akwenzeki, kuba waphicothwa umdlalo weqonga phakathi kokudodobala kwamakhondo omsebenzi. Ndandiqala ukuphulukana nokholo, uyavuma. Xa usebenza uziva uzithembile, kwaye yonke imihla ehamba ngaphandle komsebenzi uqala ukuzicenga ukuba awukwazi ukwenza kuba awenzi. Ukuba awuphangeli kwaye uyawudinga ngokwenene umsebenzi, banokukuxelela ukuba unqwenela kakhulu.
Kuvavanyo lukaBelekisi wayeqinisekile ukuba ukuzilahlela kwakhe kubonisile. Ufunde le ndawo kube kanye kwaye bathi, Enkosi, sizakuqhagamshelana. Xa wayephuma egumbini bonke baphela yintsini - kwaye ndacinga ukuba andinathuba. Kwiintsuku ezimbini kamva bandinika le nxalenye.
Usabonakala emangalisiwe ukuba konke kuyasetyenzwa. Uzalelwe eBristol ngutata wegcisa kunye nomama owayesebenza kwezemfundo, waqhayisa ngesikolo esisezingeni eliphakamileyo. Xa wayeka isikolo, eneminyaka eli-16 ubudala, izifundo awayezithanda yayizii-PE kunye nomdlalo weqonga, ke umcebisi ngamakhondo emisebenzi yakhe wacebisa ukuba ngumdlali weqonga okanye ijoni. Wazama bobabini. Ndilonwabele kakhulu usuku oluvulekileyo lomkhosi- ndiyithandile imbono yokuzilolonga kunye nezifundo zokubetha, uyancuma. Kwaye ndandingenangqondo andizange ndicinge ukuba unokwenza ngokuphila. Kodwa emva koko ndaya kwimini evulekileyo yekholeji yobugcisa, kwaye bendithanda ukubambelela, senza le nto imini yonke, yonke imihla? Le yeyam.
Isimbo sakhe seBristol singena kwilizwi lakhe rhoqo kwaye kwakhona-nakwiseti. Sifota iinyanga ezintandathu kunye neenyanga ezintandathu, uyachaza. Ndingumlandeli weSixeko saseBristol kwaye, kwiveki yokuqala okanye njalo, ukuba bendikhe ndaya kumdlalo ngempelaveki kwaye senza imeko yeemvakalelo, kuya kufuneka basike bathi, 'Awungeva ngathi uvela eBristol? Kungenxa yokuba uTom akakho. ’Ndimele ndithathe umzuzu ukushenxisa laa lilt yeLizwe laseNtshona.
Unebali likaTom langemva kwincwadi encinci ayifundayo ukumnceda ukuba abuyele kwisimilo - nangona ezama ukungavumeli iqabane lakhe libone. Ukuba uHelen undibonile ndifunda incwadi yam, ebeya kuthi, ‘Sele uneminyaka emihlanu uyenza le nto!’ Uyahleka. Kodwa obo ubudlelwane bethu. Sithatha imickey komnye nomnye ngalo lonke ixesha. Eyona nto intle, uyaluqonda uxinzelelo lokwenza kunye nendlela indima enkulu enokuthi ibutshintshe ngayo ubuntu bakho ekhaya ngelixa usenza-into enzima leyo.
Okwangoku ukhenketha kwinqanaba lemveliso yaBaphambukeli kuLoliwe - inoveli kaPatricia Highsmith edumileyo efakwe nguAlfred Hitchcock. Umntu olungileyo kaJack unyanzelwa ukuba abulale kabini ngu-Bruno onekratshi. Umdlalo unomsindo ukusuka kwigama elithi go kwaye kunzima ukuwucima nje, kodwa uHelen uyawufumana.
Ukulungelelanisa ukhenketho kunye nokuba ngutata omtsha kube nzima. Kwiiveki ezintandathu zokuqala, uHelen noWren kunye nenja beza kunye nam, uyankwantyisa. Kwakungekho mnandi kangako kuHelen kuba ndandichitha ixesha nabantu abadala rhoqo ngokuhlwa ngelixa ejonge umntwana, kodwa senze inzima ngoku kwaye kuninzi lokhenketho endinokuluhamba.
Ukonwaba kwakhe ukuba ngutata kuyacaca. UWren unenyanga ezintlanu ubudala (Uye waya kukutya okuqinileyo kwiveki ephelileyo- iintsuku ezimnandi zokudinwa kunye novuyo) kwaye nosapho lubaluleke kakhulu. Unoodade ababini kunye nomama wakhe, kodwa utata wakhe othandwayo wasweleka e2009, kanye njengokuba uJack wafumana indawo yakhe yokuqala entle eTennessee Williams's A Streetcar Named Desire, edlala noRachel Weisz, eDonmar Warehouse yaseLondon.
UJack Ashton noHelen George (Getty)
Wayegula ngelo xesha, kodwa wayesazi ukuba ndikuloo nto - wayehlala endikhuthaza ukuba ndifunde ndize ndiye kwithiyetha, utshilo uAshton. Amaxesha amaninzi xa ndandikwishumi elivisayo ndandingenamdla, kodwa ukunxanelwa kwakhe ulwazi kunye nomnqweno wokufuna ukwazi ngobomi babunamathele kum. Akazange andenze ndizive ukuba andinakwenza nto.
Emva kokusweleka kukatata ka-Ashton, usapho lwahlawula ibhentshi egameni lakhe eBristol's Greville Smyth Park. Utata wam wayemdala kakhulu - ubudala babaninzi babazukulwana babantu - kwaye wayedla ngokundixelela ngama-American GIs adlala i-baseball kuloo paki ngo-1944. Ibhentshi lakhe lijonga ezantsi apho ibala lebhola lebhola lalikhona, ngoko kukho ulungelelwaniso olumnandi ncam.
Ngokuzenzekelayo, u-Ashton usandula ukugqiba ifilimu, kwinkampani esekwe e-Utah, apho adlala khona ibanjwa lemfazwe laseMelika. Biza umbelekisi unabalandeli abalandelayo eMidwest, ke wonke umntu ebesazi ukuba ndingubani- into eyayingaqhelekanga, uyahleka. Ayinkulu njengoDownton Abbey, kodwa yandifumana umphathi wase-US.
Okwangoku, nangona kunjalo, uhlala kufutshane nasekhaya. Ukhuthazwe ngokusebenza kubaphambukeli kuLoliwe, uzakubaleka umdyarho waseLondon we-Campaign yokuZibulala ngokuLusizi (CALM). Ndibenzela ingqokelela yamabhakethi rhoqo emva kwemigqibelo yangoMgqibelo, utshilo. Ndenza intetho malunga nendlela ukuzibulala okungoyena mbulali mkhulu wamadoda angaphantsi kweminyaka engama-45 kweli lizwe.
Kananjalo unethemba lokwenza uxwebhu olusisiseko lothando. Wayenabahlobo besikolo abaphulukana nobomi babo ngenxa yoxinzelelo okanye iziyobisi. Ndingathanda ukubuza imibuzo ethile, ndlebe nabantu abaye bachaphazeleka kwaye ndizame ukufumanisa ukuba kutheni isenzeka, utsho. Leyo yiprojekthi yam ngelixa ndijonga uWren - ndingathanda ukwenza into endifuna ukuyazi, enokunceda ngandlela thile.
Kuvakala ngathi uMfu Tom apha ngezantsi uyamrabha. Mhlawumbi u… uyahleka.
iinzipho acrylic lula
sheridan smith gavin kunye nostacey
umthetho wogcino lobuninzi othe wafumanisa
ithini ixesha ispacex ukuqaliswa uk
idracula (uchungechunge lweTV)
mingaphi iminyaka karim kwi ngokungqongqo